I-EA061 - Isistimu ye-alamu ye-OMG ye-Wireless Motion | Izixazululo ze-OMG
I-Alarm ye-Toilet Emergency Distress ye-Alder Disable / Handicap (Ihhovisi, Ikhaya, Indawo Yokusebenzela Nezibhedlela)
I-Whatsapp: I-Singapore + 65 8333-4466, i-Jakarta + i-62 81293-415255
I-GPS Tracker (Okomuntu siqu Nezimoto)
Iqoqo le-Spy elifihliwe (Ukuphepha Kwekhaya)
Spy Audio mibhalo
I-Emergency Panic Alarm
Isixazululo sokuphepha komsebenzi womuntu / phansi
ISITOLO SAMazwi se-SPY
I-EA061 - Uhlelo lwe-alamu ye-OMG Wireless Motion Sensor Alarm
I-OMG EA061 Umnotho we-Cordless Monitor ne-Motion Sensor system inikeza abanakekeli inani elikhulu nokuguquguquka kokuqapha okungenantambo. Inzwa yokuhamba engenantambo ixhumana ngqo ne-Wireless Economy Monitor. Awekho amanye amadivayisi adingekayo. Ukusetha kuyashesha futhi kulula. Ungangeza izinzwa ezinyakazayo ezingenantambo, izinkinobho zokushaya ucingo zabahlengikazi abangenantambo, isitulo esingenantambo noma amaphedi wezinzwa zombhede - kuze kufinyelele kwayisithupha. Ungakwazi ukukhweza nge-tape yokufaka ekhonjiwe noma ngezikulufo. Ukukhweza umbhede: inzwa yokunyakaza yokukhweza engu-6 ”kuye ku-8” kusuka onqenqemeni lombhede ezingeni eliphansi. Ngaphezulu kokufakwa komnyango: Zungezisa inzwa yokunyakaza phansi ngakho-ke ibheke phansi. Ngokufaka inzwa yokunyakaza ngaphezu komnyango uyakwazi ukuqapha lapho umuntu ephuma egumbini.
Isistimu iza ne-1 Economy Wireless Monitor ne-1 Motion Sensor eneswidi le-swivel yokubekelwa indawo ethize yokuzwela. Kulula ukuqapha abathandekayo bephuma embhedeni noma ukuphuma egumbini. Ingasetshenziswa ngaphezulu noma ngeminyango noma eceleni kombhede.
I-Monitor isebenzisa amabhethri amathathu we "C" nezinyathelo 5.25 ″ x 4 ″ x 1 ″. I-Motion Sensor isebenzisa amabhethri amathathu we "AA" nezinyathelo 3.5 3.5 x 1.5 ″ x XNUMX ″. (Amabhethri angafakiwe)
I-Monitor in nevolumu eguqukayo (Sawubona / Lo / Med).
Ukuqapha kuyanwebeka - kungaphatha kufinyelela kuzinto ezi-6 ezingenantambo.
Into Isisindo: Ama-XUNUMX ounces
Ubukhulu bomkhiqizo: 7 x 4 x amasentimitha angu-5
Ubungako bephakheji yento: 1
Amabhethri Afakiwe: Cha
Amabhethri adingekayo: Cha
Incazelo Inqwaba: ibhethri_type_aa, ibhethri_type_c
Ukubuka okuphelele kwe-2102 Ukubuka kwe-2 Namuhla
I-EA043 - I-ALG ye-Smart Motion engenantambo ye-PIR Motion Sensor Alarm
I-EA040 - i-OMG 3 ku-1 Umhlengikazi Ongenantambo Shayela Umnakekeli…
Inzwa Yokushisa Okungenantambo + 24/7 Ukuqapha,…
I-EA007 - I-Alamu Yesimo Esiphuthumayo Esingenantambo ye-OMG…
I-EA041 - i-OMG 2 ku-1 uhlelo olungena-alamu olungenantambo,…
EA007-4D - Isimo esiphuthumayo se-OMG Long Distance Wireless…
I-EA046 - Isistimu Yokushayela okungenantambo ye-OMG nge…
I-EA018 - i-OMG Amathoyilethi Omphakathi Angangenwa Manzi futhi…
I-Singapore + 65 8866-4466
i-imeyili: sale@omg-solutions.com noma
Faka i-imeyili yakho: *
Ukuqinisekiswa kwe-imeyili: *